Ogaden News Agency (ONA) – VOA oo Xilkasdarro Darteed Kaga Qaaday Xilkuu Hayay Peter Heinlein
Posted by ONA Admin	/ November 19, 2014
Idaacadda VOA ayaa xilkii ka qaaday Peter Heinlien oo madax ka ahaa Qaybta Geeska Afrika ka dib markii baadhitaan lagu sameeyey eedeymo loosoo jeediyay inuu wararka ka been sheego iyo waliba akhlaaq darro xirfadeed.
Mareeyaha VOA David Ensor (Riix Halkan), ayaa Jimcihii lasoo dhaafay shir u qabtay Qaybta isagoo si lama filaan ah ku wargaliyay in Heinlein lagu badalay William Marsh oo ahaa la-taliyahiisa. Wuxuu u sheegay maareeyaha in Heinlein loo badalay qayb kale. Ninkan ayaa meela badan laga soo eedeeyay waxaana lagu qabsaday inuu wararka ku saabsan Itobiya ka been sheego oo siduu warka ahaa si aan ahayn u sheego, marar qaarkoodna uu qariyo war muhiim ahaa oo soo gaadhay idaacadda. Waxaa dacwada badan ka gudbiyay shaqaalaha Qaybta Amxaariga ee VOA oo ku eedeeyay arima kasoo horjeeda akhlaaqda hawsha saxaafadda.
Wariye Abebe Gellaw oo kusoo caanbaxay qayladiisii ahayd – Waxaan Doonaynaa Xoriyad! Xoriya! Xoriya! (We Need Freedom! Freedom! Freedom!”) ayaa ka mid ahaa dadka dacwada ka gudbiyay Peter Heinlein, oo u hambalyeeyay talaabadan uu qaaday maareeyaha VOA, wuxuuna yidhi; “Inkastoo aanay ahayn talaabo loo dabaaldago, hadana waxaan hubaa inay wax weyn ka tari doonto arinta tayada wararka ka baxa VOA iyo sumcada qaybta amxaariga.”
Baadhitaan uu sameeyay Xafiiska Barnaamijyada Hubsada – Office of Program Review (OPR), oo ah xafiis hoostaga Golaha Gudoomiyeyaasha Warbaahinta, kuwaasoo u qaabilsan dawladda Mareykanka ilaalinta wararka quseeya arimaha dibadda, ayaa baadhitaan ay ku sameeyeen war ka baxay VOA/Qaybta Amxaariga 12kii Augost waxay ku ogaadeen inuu ahaa war aan dhamaystirnayn oo si ulakac ah loo kala reebay. Markii lasii baadhayna waxaa la helay inuu Peter Heinlein uu ka dambeeyay arintaa oo isaga uu amray in warka qaar laga saaro oo la dhalan rogo.
Waxyaabaha xasuusta mudan waxaa ka mid ah in la sheegay in muddo yar lagu xidhay Addisabab ninkan lagu magacaabo Peter Heinlein isagoo siday yidhaahdeen waagaa lagu eedeeyay inuu ka duubayay waraysiyo muslimiinta banaan-baxyada ka samaynayay Adisababa. Muddo yar markuu xidhnaaba waa lasoo daayay dacwadii lagu soo oogayna waa la tirtiray. Dhacdadadaa waxay u sahashay in loo magacaabo Madaxa Qaybta Amxaariga, waxaana la aaminsan yahay inay wax isku ogaayeen isaga iyo kooxda Wayaanaha oo aad u yaqaana sida loo laaluusho oo loo kasbado wariyayaasha ajnabiga ah ee dalka Itobiya loo diro, iyagoo wariyihii ka diida inuu la shaqeeyo oo siday u doonayaan wararka u tabiya kasoo erya dalka.